Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football C Ronaldo Fitiavana ny Tantara momba ny Ankizy Tampoka
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny Lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anarana hoe 'Ny Sultan ny dingana'. Ny tantaran'ny tantaram-pianakavian'i Ronaldo tantaran'ny tantaram-pianakaviana Plus Plus dia mitondra ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany alohan'ny Fame, ny Fiainana / Fiainana eo amin'ny fianakaviana ary maro ny zavatra fanta-daza tsy fantany momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fifanandrinana lava niainany nandritra ny taona maro Lionel Messi. Na izany aza, vitsy ihany no mahafantatra momba ny Bio Bio's izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Inona no tsy fantatr'i Isabel Rosa da Piedade
Rehefa nandao an'i Praia teraka tany Cape Verde i Isabel Rosa da Piedade tany Cap-Verde, tamin'ny taona 16 mba ho tafavoaka velona tao amin'ny Nosy Atlantika iray hafa antsoina hoe 'Maderia', dia tsy afaka nieritreritra zavatra iray velively izy; Ho taranaka iray ao amin'ny tantaran'izao tontolo izao no horaisina ho iray amin'ireo mpilalao baolina kitra malaza indrindra, izay taranaka fahatelo aty aoriana, ny iray amin'ireo taranaka antsoina hoe 'Cristiano Ronaldo'.
Taona maro taty aoriana, ny zafiafiny, Maria Dolores dos Santos Aveiro (sary etsy ambany) no niteraka ny kintana baolina kitra malaza manerantany. Io zazalahy io, i Cristiano Ronaldo dia iray izay tsy nitondra afa-tsy ny baolina kitra nandritra ny folo taona mahery, fa nipetrahan'ny nosy Cape Verde tamin'ny sarintany an-jatony.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
I C Ronaldo dia teraka tamin'ny 5th of February 1985 tao amin'ny Nosy Cape Verdean mahafinaritra any Madeira. Noho izany, Baby Ronaldo (sary etsy ambany) dia teraka tany São Pedro ao amin'ny Renivohitra Islandy, Funchal, Portugal. Teraka tany amin'i José Dinis Aveiro (zaridaina) rainy izy ary Maria Dolores dos Santos Aveiro (cook).
I Young Ronaldo dia natsangana Katolika tao amin'ny fianakaviana mahantra tao amin'ny paroasin'ny fonjan'i Funchal ao Santo António. Izy no zandriny indrindra tamin'ireo zanany efatra, izay nateraky ny ray aman-dreniny, i Ronaldo dia nankasitraka ny rainy izay nantsoiny taorian'ny filoha amerikana Ronald Reagan. Ny fifandraisan'i Ronaldo nizara tamin'ny rainy dia tena natanjaka tokoa ka niaraka tamin'i José Aveiro tany amin'ny Gardas miasa izy.
Oh Eny! Nihanangatsiaka be izy ary nesoriny tsy nisy fiarandalamby noho ny nikiakiaka nitomany teo anoloan'ny ray aman-dreniny rehefa nanao fahadisoana izy. Raha nanao izany izy ireo, ireo mpifankatia zokiny dia nitondra tsiny noho ny fahadisoany. Mety hahaliana anao ny mahafantatra fa C Ronaldo dia tsy nitsahatra nivoaka tamin'ny akanjo. Nanana akanjo marevaka tsara tarehy izy izay nanakona ny fiainany mahantra.
Rehefa nianatra taona i Ronaldo, dia nosoratana anarana izy Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco toerana izay nanombohany ny fanabeazana fototra. Raha tao am-pianarana izy, dia tsy liana tamin'ny academics izy fa nanahy momba ny niaraka tamin'ny rainy tao amin'ny Andorinha Football tany Funchal, izay nalehany (ray Ronaldo) asa fanampiny ho kitapom-batana.
Nanjary nihanahery i Ronaldo noho ny fitomboany. Tsy hanao ny entimodiny velively izy fa aleo mihetsiketsika amin'ny filalaovany haingana amin'ny baolina kitra. Tamin'ny faha-8 taonany, dia efa nanao sonia ny klioban'ny baolina kitra Andorinha izy izay nilalao tao amin'ny onjam-peo araka ny sary etsy ambany. (Faharoa avy eo ankavia amin'ny andalana faharoa).
Ny ekipan'ny ekipan-dry zareo Ricardo Santos, (ankehitriny ny mpanazatra an'i Andorinha) dia mampahatsiahy fa ny ambangovangon'ny baolina kitra dia marefo am-pihetseham-po ary ara-pihetseham-po raha mbola tao Andorinha FC izy. Araka an'i Ricardo;
"I C Ronaldo tena tia ny fandresena," hoy i Santos nanampy. "Rehefa tsy nitranga izany, dia nitomany i Ronaldo. Be loatra izy ka nanana ny anaram-bositra 'crybaby'. "
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Nesorina tamin'ny sekoly nandritra ny vanim-potoana 14
C. Ronaldo nandatsaka seza iray tamin'ny iray tamin'ireo mpampianatra azy fony izy 14. Fampandrosoana izay nitarika ny fandroahana azy tany an-tsekoly. Araka ny tatitry ny tatitra dia nilaza izy fa tsy manaja azy ny mpampianatra azy amin'ny alàlan'ny fanaratsiana ny fidirana ao Cape Verdean ary manindry fa tsy hahatonga azy ho lehibe ny baolina kitra.
Taorin'io toe-javatra io dia nanapa-kevitra ny ray aman-drenin'i C Ronaldo fa tokony hifantoka tanteraka amin'ny baolina kitra fa tsy any an-tsekoly izy. Ny fanapahan-kevitra lehibe dia nitarika ny famoronana ny fanazavana fantatsika androany.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Dadabe Alcoholika
Tsy misotro i Ronaldo ary ny antony lehibe indrindra dia ny fisotroan-drainy na dia miala sasatra aza izy, dia mpitsikilo tsy mibebaka. Tamin'ny volana septambra 2005 dia rava i Ronaldo rehefa maty noho ny olana ateraky ny atin'ny bibikely ny rainy.
Nodimandry ny andro mialoha ny lalao fifanintsanana baolina kitra any Portiogaly i Rosia. Na dia teo aza ny fahasahireny manokana dia nanapa-kevitra ny hilalao i Ronaldo.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Fanekeny fanolanana
Cristiano dia nofoanana noho ny filazana fanolanana nataon'ilay vehivavy iray niharan'ny haino aman-jery izay niafara noho ny tsy fisian'ny porofo. Mety ho nilentika izany, saingy niteraka fientanam-po lehibe izany, ary nilaza i Ronaldo tamin'ny faran'ny vanim-potoana fa tsy nankasitraka ny fampahalalam-baovao izay noraisin'ny fiampangàna izy.
Izany no tena nitranga. Tamin'ny volana oktobra 2005, iray volana taorian'ny nahafatesan'ny rainy, dia nosamborina i Ronaldo noho ny fanolanana vehivavy iray tany amin'ny hotely Londres ary navoaka ny fonja. Nolavin'i Ronaldo ny fiampangana sy ny fiampangana navoakan'ny Scotland Yard tamin'ny volana novambra 2005 noho ny "porofo tsy ampy".
Namoaka fanambaràna iray i Ronaldo ary nilaza hoe: "Nosakafako foana ny tsy fanananako tsiny tamin'ny tsy fahombiazako, ary faly aho fa vita ity resaka ity mba hahafahako mifantoka amin'ny lalao ho an'i Manchester United.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Fiarahabana Gay
Eto indray dia nanambara tamim-pahatsorana fa i Cristiano Ronaldo dia ao anatin'ny fifandraisana am-pirahalahiana miaraka amin'ny moka Kickboxer 'Hari'. Nipoitra ny tatitra hafahafa rehefa nipoitra tao amin'ny gazety Espaniola ny tantara fa nandeha nankany Maraoka izy mba hijery an'i Hari.
Ilay mpilalao baolina kitra Portogaly, fantatra amin'ny fiarahan'ny andian-dahatsoratry ny sipaodel vavy, dia nolazaina fa hitsidika an'i Badr Hari, namana mpidoroka baolina kitra, ho an'ny 'cuddles'. Ny sary etsy ambony dia niaraka tamin'ny fanazavana iray manao hoe: 'Manambady fotsiny. Hahahaha '
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Rain'ny ankizy efatra
Ny kintan'ny Manchester United teo aloha dia lasa rain'ny taona 25 rehefa teraka tamin'ny volana 2010 ny zanany voalohany, Cristiano Jr.
Ronaldo dia tsy mbola nanambara ampahibemaso ny maha-izy ny renin'ilay zanany voalohany, fa i Cristiano Jr kosa dia olona malaza eo amin'ny fiainan'ny kintana, ary matetika izy no miseho amin'ny fehin-drainy amin'ny fankalazana ny loka.
Tamin'ny volana 2017, fito taona taorian'ny nahaterahan'i Cristiano Jr, dia nitombo roa ny fianakavian'i Ronaldo rehefa nanambara ampahibemaso ny zaza vao teraka taorian'ny fampodiana azy avy amin'ny Cup Confederation.
Ny kambana, tovolahy iray sy ankizivavy iray dia voalaza fa natao hoe Mateo sy Eva ary lazaina fa noforonina tamin'ny fanampian'ny renim-pianakaviana iray.
Taorian'ny nahaterahan'ny kambana tamin'ny fahavaratry ny 2017 dia nisy mimonomita izay noraisin'i Ronaldo handray ny fanampiana fahaefatra ho an'ny fianakaviany.
Ireo tsaho ireo dia nanamafy fa ny 32-taona dia niandry ny zanany voalohany niaraka tamin'ny Georgina sipany, izay taty aoriana dia niteraka zazavavy antsoina hoe Alana Martina.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Antony Nahoana no tsy misy tatoazy
Ho hitanao fa ny isan-jaton'ny atleta matihanina, sy ny olo-malaza, dia manana tatoazy iray farafahakeliny. Matetika izy ireny dia maneho ireo fanamby nodiavin'izy ireo mba hanatratrarana ny fahombiazany, fa i Ronaldo dia iray amin'ireo atleta vitsy izay tsy misy ranomainty.
Mahagaga indrindra raha mandalo ny fotoan-tsarotra izy ary ilay mpilalao baolina kitra lehibe indrindra eto an-tany, ary ny anton'izany dia noho izy manome ra matetika.
Any amin'ny firenena sasany, tsy maintsy miandry herintaona ianao aorian'ny fanaovana tatoazy hanomezana rà, noho izany dia mitoetra tsy misy ranonorana i Ronaldo. Izy koa dia tonga mpanome tsolotra.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Ny Museum CR7
Ronaldo amin'izao fotoana izao dia manana tranombakoka manokana ao amin'ny tanindrazany Madeira. Ny tranom-bakoka dia mirakitra ny loka rehetra sy ny trôpiny (mihoatra ny 150), miaraka amin'ny efitrano fanampiny ho an'ny trobao hoavy, izay tiany handresena.
Ny ampahany voalohany nasehony dia ny sehatra voalohany izay nandresy tamin'ny ekipany nandritra ny fahazazany, Andorinha fony izy vao 8 taona. Ny tranom-bakoka dia ny hizara ny fahombiazany nandritra ny taona niaraka tamin'ireo mpankafy azy, ary azoko antoka fa tsy manisy ratsy ny tenany ihany koa izy.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Fashion Sense
Nosokafan'i Ronaldo ny mombamomba azy manokana ao 2006 any amin'ny tanàna niaviany, ary nisy fanokafana faharoa tao Lisbonne tamin'ny 2008. Ny anaran'ilay marika, "CR7" dia maneho ny laharam-panahiny sy ny lobany, ary anaram-boninahitra nananany nandritra ny taona maro.
Ny mpivarotra dia mivarotra akanjo sy akanjo ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, fa ny zavatra azo alaina dia tsy ho an'ny olon-drehetra, miaraka amin'ny jeans miaraka amin'ny paosy vita amin'ny hoditra, diamondra-bozaka vita amin'ny diamondra sy patent ny buckled loafers izay vitsivitsy amin'ireo zavatra marefo ho an'ireo izay te hanao akanjo toa an'i Ronaldo.
Ankoatr'izay, ny mpilalao kintana izay tanjaky ny orinasa dia nametraka tsiro vaovao CR7 ao 2017. Araka ny voalazany, ny fofona dia ny "fitaovam-piadiana" izay mamela azy ho matoky tena.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Club voalohany eo an-toerana
Tao amin'ny 1995, nosoniavin'i Ronaldo niaraka tamin'ny klioba Nacional. Ny mpanazatra ao amin'ny Nacional dia nahafantatra ny talentany lehibe nataon'i Ronaldo raha nilalao baolina amboara tao Andorinha ary nanapa-kevitra ny hanova azy ho mpilalao lehibe.
Tao amin'ny Nacional Ronaldo dia nianatra ny ho ambony noho ny fampiofanana henjana tsy tapaka nataony. Ny lesona noraisina avy any Nacional dia mitoetra miaraka aminy hatramin 'ny vanim-potoana raha manohy miofana henjana izy.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -First Signing Professional
Taorian'ny nilalaovany ho an'ny Nacional, nandroso fitsarana nandritra ny telo andro niaraka tamin'ny Sporting CP izy, izay nanasonia azy avy eo. Ny torolalan'ny Sporting dia nanoro hevitra ny mpanazatra ny tanora hanasonia an'i Ronaldo, izay toa nanana talenta tsara indrindra teo amin'ny baolina mbola tsy hitany talohan'ny nahafatesany.
Izy dia nilalao ho an'ny ekipa tanora avy amin'ny 1997 - 2001. Izy no hany mpilalao nilalao tao amin'ny ekipan'ny U-16, U-17, U-18, ekipa B-ekipa, ary ekipa voalohany, ao anatin'ny iray andro.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Ny aretim-po
Taorian'ny fandroahana azy tany am-pianarana, dia nivoady i C Ronaldo mba hanaporofoana fa diso ny mpampianatra azy. Naneho ny alahelony tamin'ny fihinanana sy ny baolina izy. Tamin'ny voalohany, niasa tamin'ny haavony izy izay namolavola ireo tongolobe goavana izay hitanao ao aminy androany. Vokatr'izany dia nahazo haingana be loatra izy tamin'ny vanim-potoana maivana izay be loatra tamin'ny ankizy iray tao amin'ny zandriny. Fampandrosoana iray izay nahatonga azy hampivelatra aretim-po ho an'ny fo.
Ny aretina dia nanery azy handao ny baolina kitra. Nahafantatra tsara ny toe-pahasalamany ny mpiasan'ny klioba mpikarakara azy ary nitady fankatoavana avy amin'ny reniny momba ny fandidiana fandidiana azy. Nandalo fandidiana izy ary nandalo andro maromaro. Andro vitsy taty aoriana, nanohy ny fampiofanana baolina kitra izy.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Ilay Namana tsy hay hadinoina
Tantaran'ny fifankatiavana dia ny fomba nahafahan'i Ronaldo nandroso fialan-tsasatra niaraka tamin'i Sporting Lisbon raha nitsidika toeram-pahaizana tanora iray izy sy i Albert Fantrau namany akaiky, nilalao.
Talohan'ny lalao iray dia nilaza i Sporting Lisbon fa na iza na iza namono ny tanjona dia ho ekena ho ao amin'ny akademia. Ny ekipan'i Ronaldo dia hahazo ny lalao 3-0, miaraka amin'i Cristiano izay nitifitra ny voalohany alohan'ny nanampian'i Albert ny faharoa. Ho an'ny tanjona fahatelo, i Albert dia nandeha iray tamin'ny iray tamin'ireo mpilalao baolina kitra, nitondra ny baolina nanodidina azy ary avy eo nandalo ny baolina ho an'i Ronaldo ho an'ny fahatelo, raha azony atao ny nanapatapaka ny baolina tao anaty harato anaty.
Rehefa nanontaniana ny antony namaliany ilay namany hoe: "satria ianao no tsara noho izaho". Vao haingana izay dia nisy mpanao gazety nitsidika an'i Albert, izay tsy an'asa, mbola miaina ao anaty trano tsara tarehy ary miaina fomba fiaina mahavariana miaraka amin'ny fianakaviany. I Ronaldo no nandoa izany rehetra izany, izay tsy nanadino velively ny namany izay nahafahana nanararaotra ny fiainany nandritra ny androm-piainany mba hanampiana an'i Ronaldo tena tanora.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Mitsangàna mba haka izany
Ao amin'ny 2003, ny Sporting Lisbon sy Manchester United dia manapa-kevitra ny hanana fifaninanana am-pirahalahiana mifanohitra. Voafidy i Ronaldo mba ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny United. Taorian'i Sporting dia nandresy ny United 3-1 tamin'ny fiantombohan'ny fizaran-taona, ny mpilalao an'i United Patrice Evra sy Rio Ferdinand dia namporisika an'i Sir Alex Ferguson hanasonia an'i Ronaldo.
Tsy ny mpilalao ihany fa ny Ferguson koa dia nahavariana ihany koa ny talentan'i Ronaldo tamin'ny fisaritahana sy ny tifitra mahery. Lasa niaraka tamin'ny United nandritra ny £ 12.24 tapitrisa izy tamin'ny farany. Hatramin'izay dia tsy nitazona ny endrika mahafinaritra azony i Ronaldo, saingy nanatsara ny fahaizany, nahazo ny lalao sy ny loka lehibe ary nitazona ho iray amin'ireo mpilalao baolina lehibe indrindra. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Loka ho an'ny lehilahy indrindra indrindra amin'ny olona matanjaka indrindra amin'ny vatana
Ny rafitra fanatanjahan-tena matanjaka sy ny diary henjana dia nitazona Ronaldo tamin'ny toetr'andro ara-batana, ka namela azy tsy ampy tavy noho ny ankamaroan'ny supermodels. Ny fatotra vatana amin'ny 10% dia ahafahan'i Ronaldo hihazakazaka, hitsambikina ary hanatanteraka avo lenta kokoa noho ny ankamaroan'ny eo an-tampony, ary ho azo antoka koa fa afaka ho afaka amin'ny lalao avo lenta izy mandritra ny taona maro.
Ny haavony tsy manam-paharoa sy ny vatana matavy dia mety maninona raha manala ny lobany indraindray izy rehefa avy nitifitra ny baolina na tamin'ny fiafaran'ireo lalao, ka nametraka ny rehetra nijery tao an-trano tamin'ny henatra.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Ny lalao baolina kitra lehibe indrindra
Ny fahaiza-manaon'i Ronaldo dia singa manan-danja amin'ny lalao, satria ny fahaizany manosihosena ny mpiaro avo indrindra sy ny tandrony ambony dia midika fa ny lakroa rehetra ao anaty boaty dia miteraka olana ho an'ny mpiaro. Amin'ny fanombohana dia mety hahatratra 78 cm amin'ny tany ny kintana Portiogey, mahatalanjona 7 cm ambony noho ny mpilalao NBA.
Ny dingana avo lenta avo dia manan-danja tokoa amin'ny lalao basketball, ary ny ankamaroan'ny mpilalao dia manana dingana lehibe hikorontana ny fikomiana, ny fifanintsanana ary ny fanafihana ny harona. Raha toa i Ronaldo dia mihoatra ny enin-jato santimetatra, mety ho nanao fanatanjahan-tena hafa azony notarihina izy.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Free Kick Speed
Ny haavon'ny hafekick Ronaldo dia manodidina ny 130 kilaometatra isan'ora, izay midika hoe 31.1 metatra isaky ny segondra avo efatra heny noho ny fandefasana fiaramanidina Apollo 11 Metatra 7.3 isaky ny segondra.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Taratsezina Torolalana Torina
Nanao tantara mahagaga izy rehefa farany no nahitana ny ambadik'ilay tambajotra manohitra ny rivodoza Atletico Madrid ao amin'ny minitra 7th. Ity dia statistika izay hitan'i Lionel Messi manafintohina. Miaraka amin'izany tanjona izany, Ronaldo dia omena isa-minitra amin'ny lalao 90-minitra.
Ity horonan-tsary mahatalanjona ity dia manaporofo ny maha-raleo an'i Ronaldo sy ny maha-fandrahonana azy amin'ny fotoana rehetra amin'ny lalao. Nataony ihany koa ny tanjona 20 tao amin'ny minitra 90th, izay nahatonga azy ho mpikorisa, mpilalao marefo sy mahafaty ary ny iray amin'ireo tontalim-potoana rehetra.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Ny Wayne Rooney Saga
Ny tranga malaza manerantany dia nitranga nandritra ny fifanandrinana am-polotaonan'i Angletera sy Portiogaly tao Portiogaly - izay namoy ny liona telo tao amin'ny sazy. Saingy ny teboka fototra momba ny lalao dia rehefa nandefasan'i Rooney ny 'fametahana' an'i Ricardo Carvalho. Maro ny zavatra maharikoriko nataon'ny ekipan-dry Manchester United, Ronaldo dia nirohotra nankany amin'ny mpitsikilo mba hiantso ny ratsy.
Nipoitra tahaka ny hoe i Ronaldo dia tsy nahomby tamin'ny fanampiana an'i Rooney nahazo mena, faly ihany koa izy. Maro no nihevitra fa mety ho ny endriky ny kintan'ny kintan'i Portiogaly ao United, saingy nifarana nandritra ny telo taona hafa izy ary nandresy ny Ligin'ny Champions.
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -Football Prank
Cristiano Ronaldo dia naneso ny mponina tao Madrid tamin'ny fotoana nipetrahany ho lehilahy tsy manan-kialofana teny an-dalambe. Nataon'ilay kapiteny Portiogaly 30-taona ilay olona fanta-daza fanta-daza tamin'ny alàlan'ny fanehoana ny fahaiza-milalao baolina malaza.
Ilay mpilalao Real Madrid dia nanolotra volomparazara brunette tsy niravaka, volombava matevina sy volombava matevina mba hanafenana ny endriny mipetaka sy akanjo matavy mba handikana ny fanorenany.
Ireo izay tsy niraharaha azy tamin'ny fahitana azy ho olona tsy manan-kialofana dia mbola manenina ny hetsika mandra-pahatongany. Jereo ny lahatsary etsy ambany;
C Ronaldo Childhood Tantara Plus untold Biography Facts -LifeBogger Rankings
Tsy misy fisalasalana fa i C Ronaldo dia Legend eo amin'ny sehatry ny roa hoditra ary Maradona.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i C Ronaldo bebe kokoa momba ny tantaram-piainana tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Fonkem primus Antepioh 9 Mey 2017 Amin'ny 10:10 hariva
Fantany fa izy no mpilalao baolina kitra tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Tiako izy. Izy no hitondra an'i Real Madrid amin'ny laliga 2016 / 2017 ary tompondakan'i 2017 tompon-daka tompondaka erantany. Andriamanitra dia hanohy hanome azy ny fahasoavana.
Daty navaozina: 4 aogositra 2018